Ukubeka iliso kumaxabiso entengiso yesitokhwe | Ezezimali
Abatyalomali banokukhetha kuluhlu olubanzi lwamajelo olwazi ukufumana imeko yangoku yotyalo-mali lwabo. Ngamaxesha onke kuxhomekeka kwiimfuno zakho, kwaye phakathi kokuime kukufikelela kokutsha Iinkonzo zetekhnoloji. Banikezelwa ngamaziko emali kubathengi babo ukuze ngale ndlela kulandelwe ngokugqibeleleyo iseshoni nganye yorhwebo enokulandelwa. Ukusuka naphi na, nkqu nangeeholide okanye ngokuhlala phesheya.
Kuqhelekile ukuba abanye abatyali mali, emva kokwenza imisebenzi yokuthenga kwimarike yemasheya, bangahoyi amaxabiso abo ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi. Ezi ntshukumo zinokuvelisa iimeko ezingathandekiyo kwaye ngamanye amaxesha ukumangala okungalunganga umdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi. Esi sizathu esikukhuthaza ukuba ube ngaphezulu ilinde ukucaphula yexabiso lemarike yemasheya.
Ingxaki ilele kumzuzu ofanelekileyo wokuzibuza ukuba ungafumanisa phi ukuba utyalomali lwakho kwii-equities, zeziphi iindlela onokuzisebenzisa ukukhangela imeko yotyalo-mali lwakho okanye loluphi ulwazi onokulufumana malunga nexabiso. Ngale ndlela, ungaya kwezimbini imithombo yolwazi ezifikeleleka ngokulula. Kwelinye icala, kwibhanki uqobo apho kufakwa khona iakhawunti yakho yezokhuseleko. Kwaye, kwelinye, ngokuya kwimithombo yeendaba ezikhethekileyo.
1 Landela: njani?
3 I-Intanethi okanye iselfowuni
4 Sebenza kwiholide
5 Amaqhinga ekufuneka enziwe
6 Izicelo zotyalo mali
Malunga nemithombo yokuqala, iziko apho lisebenza rhoqo liya kukwazisa ngokuthengwa okwenziweyo, kunye notshintsho olwenziwe, kodwa kungaze kube malunga nokuvela kwayo, okuya kuthwalwa ngumtyali mali. Kodwa ikunika izixhobo ukuze ukwazi ukulandelela ngokuchanekileyo utyalo-mali lwakho. Inokulandelwa kwakhona ngokusebenzisa ngeefowuni zebhanki Oku kuyakukubonelela ngexabiso lotyalo-mali lwakho ngexesha elifunekayo, kodwa ngonciphiso olusebenzayo okomzuzwana othile, nokuba kungenxa yokuba ufuna ukuthengisa okanye ukungazi nje ukuba lixabisa njani emva kwexesha elide ungazi ukuvela kwayo kwintengiso yesitokhwe.
Eyona ndlela isebenzayo yeyokubhankisha. kumgca ebonelela ngolwazi ngexesha lokwenyani kuwo onke amaxabiso ezalathiso eziphambili zamanye amazwe. Ukusukela nayiphi na indawo, Ukuvumela ukuba utshintshe ukusebenza ngokusekwe kwidatha entsha: yenza intengiso iyonke okanye inxenye, sebenzisa a ukuyeka ukulahleka, yenza ukuthengwa, njl. Kwaye, ngoncedo olukhulu olunokuthi lwenziwe kokubini ukusuka emsebenzini, ekhaya okanye eholideyini, nokuba ukwindawo ekuyiwa kuyo kwilizwe liphela. Uya kudinga kuphela iphasiwedi oyinikwe yibhanki ukufikelela kulwazi kwaye usebenze neziko.
Kulungiselelwe abo bangenako okanye abangenako ukufikelela ebhankini kwi-intanethi, Isisombululo kule ngxaki kukuya rhoqo kwimithombo yeendaba, ngakumbi ezo zikhethekileyo. Onke amaphephandaba eendaba ezwe anikezela ngolwazi kumaxabiso ezokhuseleko, nangona amanye awo enikezela kuphela kuluhlu olubhalwe "IBEX 35”. Kufuneka kwakhona kuthathelwe ingqalelo ukuba olu lwazi luya kufumaneka luya kuba lolosuku olungaphambili hayi kwiseshoni enye, ke iya kuba lulwazi olubonisa ngokukodwa, ungaze uthathe isigqibo sokufaka isicelo ekusebenzeni okanye kwixesha elifutshane kakhulu.
Kule meko, kungcono ukuya kweminye imithombo eya kuthi inike ulwazi, ukuba alikho ngexesha lokwenyani, ewe kuhlehlisiwe kodwa ukulibaziseka ngemizuzu embalwa. Ngokusisiseko, ifezekiswa kwi-Intanethi ukusukela ukuba uninzi lweemarike zentengiso kunye neendawo zolwazi lwezoqoqosho zinikezela ngale ndlela, ikwabonisa umthamo wentengiso, ubuncinci kunye nobukhulu beseshoni nganye yorhwebo, phakathi kwezinye iiparameter. Banethuba lokuba kwiimeko ezininzi, awunyanzelekanga ukuba ubhalise ukufikelela kwezi nkonzo, kodwa ngokuchaseneyo vumela ukufikelela kwabo ngokukhululekileyo.
I-Intanethi okanye iselfowuni
Kwabo bangenayo Ukufikelela kwiInternet Isisombululo sikwiskrini esincinci, kodwa kule meko ngenkonzo yemfonomfono apho idatha yemarike yemasheya yexabiso losuku inokufumaneka nayo, kwaye nangona inolibaziseko oluncinci kulwazi lwayo, inokusebenza ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na imeko engxamisekileyo imeko ngenxa yokungabinazo ezinye iindlela zokufikelela kolu lwazi.
Esinye sezona zisombululo zisemgangathweni abanazo abatyali zimali abancinci nabaphakathi seso sinikezwe siselfowuni ngonxibelelwano kumjelo onale nkonzo kwaye, ovumela ukusebenza kwexesha lokwenyani Imarike eqhubekayo nakolona tshintshiselwano lubaluleke kakhulu lwamanye amazwe, kunye nekhontrakthi yekamva kunye nokukhetha kwi-MEFF (kwimakethi yezemali yaseSpain) nakwi-Eurex (kwintengiso yezemali evela kwimarike yaseYurophu). Ngale nkonzo unokusebenzisa izixhobo eziza kunceda umsebenzisi azenzele izigqibo zotyalo-mali.
Ngayiphi na imeko, kwimeko yohambo lokonwaba okanye ukunqamla unxibelelwano kwinto yemihla ngemihla, kungcono ukulibala iintsuku ezimbalwa ukuba utyalo-mali lwethu luguquke njani kwaye oku kunokufezekiswa ngesicwangciso esiphindwe kabini esifumaneka kuye wonke umntu. Okokuqala ukushiya iiakhawunti zethu kwi amatyala apheleleyoOko kukuthi, ukulahla izikhundla zokuthenga ukuqala inkqubo yokuthenga nje ukuba bafike kuhambo.
Okwesibini, kusetyenziswa ii-odolo ezinemiqathango eziza kubangela ukuba iindawo zokuthenga zitshintshwe ngexabiso elithile. Kulula kakhulu ukuzisebenzisa kwaye ziya kuvumela umsebenzisi ukuba achithe iintsuku ezimbalwa ngoxolo olupheleleyo lwengqondo kwindawo abaya kuyo esazi ukuba iodolo yabo iyakusetyenziswa ngokunyanzelekileyo ukuba ifikelela kwixabiso esilinike lona ukuthengisa izabelo, ezinokuthi zihambelane, umzekelo, ngenqanaba lokumelana. Le yokugqibela yenye yeendlela ezicetyiswayo Amaxesha okuphumla njengehlobo, iPasika okanye iKrisimesi. Kwaye, ngaphandle kwayo nayiphi na ikhomishini okanye intlawulo eyongezelelweyo evela ebhankini okanye kwibhanki yokonga.
Kutyalo-mali lwexeshana elifutshane, kubaluleke ngakumbi ngakumbi ukuba sazi ukuba amaxabiso ezokhuseleko kwiipotfoliyo zethu zotyalo-mali axabisa njani. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Kungenxa yokuba imisebenzi ye thenga uthengise kufuneka zenziwe ngobuchule obukhulu. Nokuba kwiiyure ezimbalwa ukuba iimarike zezimali ziyayicebisa. Ngale ndlela, asizukukhetha ngaphandle kwesixhobo esingaqhelekanga esisibonelela ngexabiso leeasethi zemali ngexesha lokwenyani.
Kwelinye icala, ukuba utyalo-mali luza kuba nexesha elide, akukho kungxamiseka ukuthatha eli nyathelo. Kodwa ke, kuyacetyiswa ukuba ube ulwazi lokufika ngexesha kunye nolwazi oluqhelekileyo imeko ngqo yokuhamba kwethu kwiimarike zezabelo. Kwimeko apho kufanelekileyo, kuyafuneka ukuba sitshintshe isicwangciso-mali sethu. Ngale ndlela, unokwenza inkqubo elawula uphuhliso lotyalo-mali kwimarike yemasheya ngendlela echanekileyo. Nokuba yeyiphi na iprofayile oyincedisayo njengomtyali mali ophakathi naphakathi. Eli linyathelo elinokukuzisela izibonelelo ezinkulu ukusukela ngoku.
Izicelo zotyalo mali
Ngayiphi na imeko, kuya kufuneka ukhathazeke ngokugqithileyo ukusukela ngoku ekubeni unokukhuphela uthotho lwezicelo zobuchwephesha ezinoxanduva lokulawula utyalomali lwakho. Ukongeza, ngoncedo olukhulu lokuba simahla kwaye sinokulungelelaniswa nayo nayiphi na Isixhobo sobuchwephesheNokuba yintoni, akukho zithintelo kulo mbandela wobugcisa. Kwelinye icala, awufanelanga ukulibala ukuba ezi zicelo zikunika iinkonzo ezininzi ngakumbi kunoko unokufuna kuqala ukwanelisa le mfuno ikhethekileyo kwaye eli nqaku lingumxholo kuyo.
Ngelixa ngokuchaseneyo, ungazivumela ukuba uhlalutye kwaye uvavanye ukuba ngawaphi amaxabiso ashushu kakhulu ngalo mzuzu. Ukuze ungene okanye uphume kwiimarike ze-equity ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo. Ngamafutshane, yi sixhobo oko akufuneki kuphoswe kuso nasiphi na isicwangciso-nkqubo sotyalo-mali oza kusiphuhlisa kula maxesha achanekileyo. Ayothusi into yokuba awukwazi ukwenza ngaphandle kwenkqubela phambili yetekhnoloji ukukuxhasa ekwenzeni ezona zigqibo zibalaseleyo kwilizwe elihlala linzima lemali. Akusekho okungaphantsi.
Kungenxa yokuba ekupheleni kosuku, yintoni malunga nokwenza ukonga kunenzuzo kunye neziqinisekiso ezinkulu zempumelelo kunye nazo zonke izixhaso ezinokubakho, ngakumbi ezo zithathwe kubuchwephesha obutsha. Ngoku unethuba lokungena kule modeli intsha yotyalo-mali eya kuthi ngokuqinisekileyo ikuncede kakhulu ukuhambisa yonke imisebenzi yakho kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, uyakubona ukuba ukusukela ngoku izinto ziya kuba ngcono kakhulu kuwe nakukhuseleko oluthembisa kwiimarike. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba uya kufikelela kwisigqibo sokuba kufanelekile ukusebenzisa le nkqubo yolwazi ukubeka esweni amaxabiso entengiso yemasheya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukulandelelwa kwexabiso lemarike yemasheya